XOG: Afar Sarkaal oo Telefanadooda laga helay Sheeko dhex martay iyaga & Ismiidaamiyayaashii Otto Otto – Kismaayo24 News Agency
XOG: Afar Sarkaal oo Telefanadooda laga helay Sheeko dhex martay iyaga & Ismiidaamiyayaashii Otto Otto
by admin 9th July 2018 074
Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa xarig magaalada Muqdisho loogu geestay 14 Sarkaal oo loo heysto weerarkii lagu qaaday xarunta Otto Otto oo Saldhig u ah Wasaarada Arrimaha Gudaha xukuumada Somalia.
Saraakiishan oo isugu jira Boolis iyo Nabad Sugid ayaa xarigooda wuxuu ka dambeeyay kadib markii shalay gelinkii dambe ay kulan deg deg ah Guddiga amniga ku yeeshen Muqdisho, kaasi oo uu shir Guddoominayay Wasiirka amniga.
Baaritaanka Saraakiisha ayaa ka socta xarunta baarista Villa Somalia iyo xarunta CIDda Degmada Hodan, waxaana ka qeybqaadanaaya Saraakiil ka socta Wasaarada amniga.
Xogta aan heleyno ayaa muujineysa in ku dhawaad afar Sarkaal ay ku cadaatay inay ku lug lahaayen weerarka Xarunta Otto Otto oo galitaankeeda ay u sahleen AlShabaab.
Baaritaanka Saraakiisha ayaa la xaqiijiyay inay fududaatay kadib markii codad dhageysi ah laga helay teleefoonada gacanka oo ay wataan kuwaa oo lagala xiriiraayay Ragga fuliyay ismiidaaminta iyo maleeshiyaadka gudaha u galay xarunta.
Sidoo kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in ciidamada dowlada ee ku sugan barahakoontarool ee lasoo mariyay gaadiidka qarxay ay qireen in Taliyayaashooda ay amar kusiiyeen inay fasaxaan gaadiidka, iyadoo wixii intaa kadanbeysay uu dhacay Qaraxa iyo weerarka fool­ka­foolka ah.
Geesta kale, waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lasii deyn doono Saraakiisha qaar, halka gacanta baarayaasha ay kusii jiri doonaan Saraakiisha maamusha barahakoontarool ee lasoo mariyay gaadiidka.
Muxuu Sharcigu Ka Qabaa Mas’uuliyiinta Rayidka Ah Ee Xirta Dharka Ciidanka?
Akhriso: Qorshaha ay xukuumadda soomalia u dajisay mushaaraadka ciidamada xoogga dalka iyo hanaanka loo…
DEG DEG: Wariye ka tirsanaay Idaacada Codka Mudug oo Goordhaw u Geeriyooday dhaawac maanta ka soo gaaray Dagaalka Galkacyo+Magaciisa
Tifaftiraha K24 6th November 2016
Xukuumada Somaliya oo digniin adag u dirtay shakhsiyaad ay ka war-heshay in ay garab siinayaan dowlado shisheeye.